Oovimba beMinenga-Funda ukuRhweba
I-Bitcoin ibona ukuhla kweBullish njengoMnenga oqhubeka nokuThengisa ukuThengisa
On-chain chain analytics Santiment ulumkisile Bitcoin (BTC) Abathengisi abaneminenga yezigidi abangabatyhalela ngaphandle kwentengiso. I-analytics firm ibonakalise ukuba iidilesi ze-whale ezibambe phakathi kwe-100 ukuya kwi-10,000 BTC zilahlile ukubamba kwabo nge-6-7 kaSeptemba.
U-Santiment uqaphele ukuba emva kokuba abathengisi babhukishe inzuzo emva kwengozi ye-15%, le minenga yaphinda yafumana i-BTC. Iminenga eyi-Millionaire-tier whale ithenge malunga ne-60,000 BTC kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo, ibangela ukunyuka nge-5%. I-Santiment iqaphela ukuba le yimeko yeklasikhi yokumpompa kunye nokulahla iminenga ukucinezela ukubonelela kubatyali mali.
Ngeli xesha, abaququzeleli beGlassnode “UYann noJan” uxele umbono ofanayo, ephawula kuhlaziyo lwabo lwamva nje ukuba:
“Abambalwa #Bitcoin abanini bashukunyisiwe kule veki iphelileyo, beqonda ilahleko kwikhonkco. Izandla ezomeleleyo zangenelela zaza zathenga idiphu. Njengokuba i- $ BTC iqhekeza ngaphezulu kwe- $ 48k, umnatha uqaphela ukuba i-PnL ibuyile, kwaye intengiso iyayifunxa loo mali isetyenzisiweyo. ”
Nangona kunjalo, izandla zakudala zeBitcoin zibonakala ngathi azixhalatyiswanga kukungazinzi kweBTC kutshanje. "Izandla ezindala" yileyibhile enikwe abatyali mali ababambe i-BTC ngaphezulu konyaka. Kwakhona, i-Spent Volume Age Bands (SVAB) yeetriki ibonisa ukuba inkcitho yeemali ezindala yehle kwiminyaka emininzi ephantsi. Le ngxelo ibalaselisa ukuqiniseka okukhulu phakathi kwezandla ezindala kwintengiso.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBonwayo-Septemba 16
I-cryptocurrency ebekiweyo ibhale ngokuqina i-11% ukusuka ekuweni kwayo kwakutshanje kufutshane ne-43,000 yeedola njengoko abathengi bevenkile bebuyela kwimarike. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zisilele ukulungelelanisa ukwaphula ukunganyangeki kwe- $ 48,500 kubangela ukuba ixabiso liyeke phakathi kwe- $ 48,500 kunye ne- $ 47,600.
Oko kwathethi, ikhefu elingaphezulu kwenqanaba lokuchasana elikhankanyiweyo kufuneka livule iminyango kwelinye irali elibukhali elibhekise kwiimpawu zengqondo ze- $ 50,000, ngakumbi ngokujonga uxinzelelo olongezelelekileyo olusuka kwi-4-yure yokunyuka kwethuba.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 48,500, i- $ 49,500, kunye ne- $ 50,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 47,600, $ 47,000, kunye ne- $ 46,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.18 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 898.2 billion
I-Bitcoin Dominance: 41.1%
I-Bitcoin Whales Record Record enkulu yokuThengwa kweMihla ngemihla kulo nyaka
Inkampani ye-analytics ye-analytics iSantiment isandula ukuveza Bitcoin (BTC) Iminenga ithenge i-BTC engama-60,000 ye-BTC ngosuku olunye, eyona nto ifunyenwe yonke imihla ngo-2021. I-Santiment iphinde yaqaphela iidilesi ze-whale ngoku zibambe malunga ne-9.12 yezigidi ze-BTC, i-100k ngaphezu kweeveki ezintandathu ezidlulileyo.
Ngelixa uninzi lwabatyali zimali abathengisayo bothukile okoko i-Bitcoin iqale i-selloff yayo, iminenga ithathe ukwehla njengethuba lokugcina izinto ze-crypto.
I-on-chain analytics firm ibonakalise ukuba iidilesi ezibambe ubuncinci i-10,000 BTC zithengwe ngaphezulu kwe-90,000 BTC ngenyanga. Ifemu iqaphele ukuba ezi "Uber mkhulu" iidilesi zinesiqingatha sayo yonke i-BTC ekujikelezeni kwayo.
Ngaphandle kwe China FUD yakutshanje kunye nokungazinzi okubangelwe ngu-Elon Musk, iingxelo zibonisa ukuba iminenga iyaqhubeka nokuqokelela i-BTC izisa ipotifoliyo yabo ngokudibeneyo nge-3.6 yezigidigidi zeedola kwezi veki zintandathu zidlulileyo.
Ngokwesiqhelo, imisebenzi yeminenga iba nefuthe kwangoko kwintengiso. Ukulandela ukuthengwa kweminenga ye-60k BTC yakutshanje, i-cryptocurrency ebekiweyo ibekwe nge-5% kwiiyure ezimbalwa. Olu nyango luncede ikhefu le-cryptocurrency elingaphezulu kwe- $ 35k uphawu ngaphambi kokuhla kwanamhlanje.
Ngelixa abaninzi behlala bexhalabile malunga nokwehla kwe-BTC ye-hash rate kunye nolungelelwaniso lobunzima, uJulayi uqalile ngokuqinisekileyo kwi-cryptocurrency.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-6 kaJulayi
Emva kokuchukumisa uphawu lwe- $ 36k izolo, eyona mali iphambili yedijithali ithumele ukulungiswa okukhulu kwi- $ 33k. Nangona kunjalo, ukwehla yayiyeyethuba elifutshane njengoko iinkunzi zeenkomo zatyhala i-cryptocurrency ibuyela umva ngaphezulu kwendlela ehamba phambili.
Ngexesha lokushicilela, iimfazwe ze-BTC kunye nokuchasana okubalulekileyo kwe- $ 35k njengoko imisebenzi yenkunzi inyuka. Oko bekuthethile, ikhefu elingaphezulu kwenqanaba leedola ezingama-35k kufuneka lincede i-cryptocurrency ibuyise kwakhona ukumelana ne- $ 36k kwiiyure ezizayo. Silindele ukuqhubeka okuqhubekekayo ngaphezulu kweeyure kunye neentsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 35,500, i- $ 36,000, kunye ne- $ 37,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 33,750, $ 33.000, kunye ne- $ 32,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 643.7 billion
I-Bitcoin Dominance: 44.8%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, iindaba, Makhoba
I-Ripple ibona ukwanda komsebenzi we-Whale ngaphandle kwe-Bear Market
I-Ripple (XRP) Kubonakala ngathi ibambe umgca we-0.6000 weedola kakuhle kwaye imarike ebanzi iphola kwingozi yayo yamva nje. I-Ripple ithengiswe ngaphezulu kwe-6% ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo, ngelixa intengiso iyonke yentengiso ye-crypto ifumene ngaphezulu kwe-100 yezigidigidi zeedola kwangelo xesha linye.
Okwangoku, imikhomo ye-Ripple ikuyo kwakhona njengeebhloko ezinkulu zezandla zotshintshiselwano zeXRP kwintengiso. Isilumkiso seWhale, iqonga le-blockchain analytics, kutshanje linike ingxelo yokuthengiselana ngeXRP yezigidi zezigidi ezingama-26 (ezixabisa malunga ne- $ 18 yezigidi) ukusuka eBinance ukuya kwisipaji sabucala. Iqonga lokuhlalutya liqaphele ukuba intengiselwano yenzeke ngoLwesine odlulileyo eBithomp.
Le ntengiselwano iza emva kweeveki nje ezimbini emva kokuba enye i-akhawunti yomnenga i-XRP ihambise iingqekembe zemali ezizigidi ezili-176 (ezixabisa malunga ne-146 yezigidi zeedola ngelo xesha) kwenye ingxowa yabucala.
Ezi ntengiselwano ze-behemoth ziza ngaphandle kweemarike zebhere. Into enomdla kukuba, inani elipheleleyo leakhawunti ye-XRP whale ibone ukonyuka okukhulu kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo. Ngokwengxelo yeMakethi ye-Q1 2021 ejikelezwe ngumnikezeli wesisombululo sentlawulo esekwe eSan Francisco, ingqokelela ye-XRP yanda kakhulu kwiinyanga ezintathu zokuqala zika-2021. Kwingxelo yakutshanje, uRipple uqaphele ukuba:
“Inani lezipaji 'zomnenga', ezichazwe njengezipa ezinobunzima obuyi-10M XRP, lenyuke ukusuka kuma-308 ukuya kuma-319. Ngokufanayo, inani lezipaji ezibambe phakathi kwe-1M ne-10M zemali lonyukile ukusuka kwi-1,125 ukuya kwi-1,196.”
Amanqanaba aphambili e-Ripple ukuba abukele-nge-28 kaJuni
Ngaphandle kokukhula okubanzi kwe-bullish, i-XRP ihlala ikwi-bias ebanzi. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu. Emva kokuzama ukwaliwa kumanqaku engqondo ayi-0.7000, uRipple wawela kumdlalo wokudlala-phakathi komdlalo ophakathi kwe- $ 0.6000 kunye ne- $ 0.6500.
Nangona kunjalo, lo mzuzu unokubonisa ukomelela kwamandla emarike. Oko kwathethi, ikhefu elicocekileyo ngaphezulu kokuchasana ne- $ 0.6500 kwiiyure ezizayo kunokunceda iXRP ibuyise inqanaba le- $ 0.7000 kwaye iqhubeke ngaphezulu.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.4 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 29.8 billion
Ukulawula kweRipple: 2.12%
tags Cryptocurrency, iindaba, Ripples, Makhoba, XRP